ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Worldwide Church of God Switzerland
အတိုကောက်အားဖြင့် WKG ဟုခေါ်သော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ အင်္ဂလိပ် "Worldwide Church of God" (ကတည်းက 3. ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလကို Grace Communion International ဟူသောအမည်ဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် လူသိများသော) ကို ဟားဘတ်ဒဗလျူ အမ်းစထရောင်း (၁၈၉၂-၁၉၈၆) မှ US တွင် 2009 တွင် "ရေဒီယိုဘုရားကျောင်း" အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သတ္တမမြောက်နေ့၏ဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်း၏တရားဟောဆရာဟောင်းတစ်ဦးနှင့်ခန့်အပ်ခံရသောအမ်းစထရောင်းသည်ရေဒီယိုမှတစ်ဆင့်ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းနှင့် 1934 ခုနှစ်မှစ၍ "ကမ္ဘာ့မနက်ဖြန်" ရုပ်မြင်သံကြားဌာနများတွင်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အမ်းစထရောင်းက 1892 ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ "The Plain Truth" မဂ္ဂဇင်းကို ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် 1986 ခုနှစ်မှ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး “The Pure Truth” အဖြစ်နှင့် 1968 မှ “Clear & True” အဖြစ်။ 1934 တွင် ဂျာမန်စကားပြော ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ ပထမဆုံးအသင်းတော်အား ဇူးရစ်မြို့တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ခဏအကြာတွင် ဘေဆယ်တွင်ဖြစ်သည်။ 1961 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အမ်းစထရောင်းသည် လက်ထောက်အထွေထွေသင်းအုပ်ဆရာအဖြစ် Joseph W. Tkach ကို ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အမ်းစထရောင်း ကွယ်လွန်ပြီးနောက် (၁၉၈၆) တွင် Tkach Senior သည် တဖြည်းဖြည်း ...
ယေရှုခရစ်ကိုအလေးပေးခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာအသက်တာကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအနေနှင့်ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုံကြမ္မာနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည့်အခြေခံမူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသောကျမ်းစာဆုံးမEmဝါဒကိုအလေးပေး We ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျမ်းစာသင်ကြားမှုကိုခိုင်မာ to စေရန်သန္နိare္ဌာန်ချထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအယူဝါဒများမှာခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်များဖြစ်ကြောင်း ...
အတိုကောက် WKG၊ အင်္ဂလိပ် Worldwide Church of God (ကတည်းက 3. ဧပြီလ 2009 ခုနှစ် Grace Communion International) သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကာလကြာရှည်တည်မြဲသော ယုံကြည်ချက်နှင့် အလေ့အကျင့်များစွာအတွက် ရာထူးများကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ဟူသော ယူဆချက်အပေါ် အခြေခံထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအရာကို အတိတ်တွင် ဟောကြားထားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးထားကြောင်း သတင်းစကားနှင့် အမြဲဆက်စပ်နေပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်တာကာလအတွင်းဘုရားသခင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်၊ အထူးသဖြင့်အခြားခရစ်ယာန်များအားအစဉ်အလာနားလည်မှု၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ထောင်သူဟားဘတ်ဒဗလျူအမ်းစထရောင်းသေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲ၏အတိုင်းအတာနှင့်အမြန်နှုန်းသည်ထောက်ခံသူများနှင့်ပြိုင်ဘက်များကိုအလွန်အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ဒါဟာငါတို့ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုရကျိုးနပ်သည် ...
Joseph Tkach သည် အတိုကောက်အားဖြင့် "Worldwide Church of God" သို့မဟုတ် WKG ၏ သင်းအုပ်ဆရာချုပ်နှင့် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်။ ကတည်းက 3. ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ဘုရားကျောင်းကို "Grace Communion International" ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Tkach သည် 2009 ခုနှစ်မှစတင်၍ ခန့်အပ်ခံရသော ဓမ္မအမှုဆောင်အဖြစ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘုရားသခင်၏ကမ္ဘာ့ချာ့ချ်တွင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ သူသည် ဒက်ထရွိုက်၊ မစ်ရှီဂန်ရှိ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ဖီးနစ်၊ အရီဇိုးနား၊ Pasadena နှင့် Santa Barbara-San Luis Obispo။ သူ့အဖေ Joseph W. Tkach Sr. က Dr. Tkach အတွက်...
ဟားဘတ်ဒဗလျူအမ်းစထရောင်းသည် ၁၉၉၆၊ ဇန်နဝါရီလတွင်အသက် ၉၃ နှစ်အရွယ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတည်ထောင်သူသည်ထူးခြားသောစကားပြောခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းစတိုင်ဖြင့်ထူးခြားသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူသည်လူပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်အားသူ၏ဘာသာပြန်ဆိုချက်များကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ထုတ်ဝေရေးအင်ပါယာတစ်ခုအတွင်းသို့တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်လျှင်လူ ဦး ရေ ၁၅ သန်းကျော်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ သခင်ဘုရား၏သွန်သင်ခြင်းများကိုအလေးအနက်ထားသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်အခြားသူများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော၊ အရေးပါမှုရှိစေရန်သင်ကိုယ်တိုင်နာမည်တစ်ခုပြုလုပ်ရလေ့ရှိသည်။ လူတွေဟာဝိသေသလက္ခဏာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေလို့မရတဲ့ရှာဖွေမှုတွေလုပ်နေပုံရတယ်။ သို့သော်ယေရှုက“ မိမိအသက်ကိုတွေ့သောသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည်ငါ့ကြောင့်အသက်ရှုံး၏၊ ထိုသူသည်အသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်” (မ ၁၀း၃၉) ။ ချာ့ချ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမှန်တရားမှသင်ယူခဲ့ကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းကကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း။
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒကလူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟူသောယူဆချက်သည် universalism ကိုသွန်သင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သူသည်ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်၊ နောင်တရသည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ယေရှုကိုလက်ခံသည်ဖြစ်စေငြင်းပယ်သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ ဒါကြောင့်ငရဲဘုံဆိုတာမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ဤပြောဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲနှစ်ခုရှိသည်။ မှားယွင်းသောမှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒကိုယုံကြည်ရန်မလိုအပ်ပါ။
wide ၀ ံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းအား Jesus ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောနိုင်ရန်သခင်ယေရှုနှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်ကမ္ဘာတစ်ခွင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း (WKG) ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ။ သခင်ယေရှုနှင့်သူ၏သတင်းကောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ခြင်းသည် ၂၀ ရာစု၏နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏သွန်သင်ချက်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်အခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်လက်ရှိ WKG ၏ယုံကြည်မှုများသည်ယခုအခါသမိုင်း - ရှေးရိုးစွဲခရစ်ယာန်များ၏သမ္မာကျမ်းစာအယူဝါဒများကိုအခြေပြုထားသည်ဟူသောအချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။